Madaxweyne Xaaf oo si kulul u beeniyay hadal maalmihii ugu dambeysay la hadal haayay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xaaf oo si kulul u beeniyay hadal maalmihii ugu dambeysay la hadal haayay
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) ayaa si kulul u beeniyay warar maalmihii ugu dambeysay laga faafiyay, kaas oo ku saabsan inuu kullamo la yeeshay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne Xaaf oo maanta kasoo laabtay safar uu dhawaan ku tagay magaalada Nairobi ayuu sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya inuu Nairobi kullamo kula yeeshay saraakiil ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta.
Wuxuu madaxweyne Xaaf sheegay in safarkiisa ku saabsanaa kullamo uu la yeeshay hay’adaha deeq bixiyaasha iyo hay’adaha Qaramada Midoobay, isagoo codsiyo ku saabsan Galmudug hordhigay, islamarkaana uu la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee Galmudug.
Dhinaca kale, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waday olole ay kula xiriireyso maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.
Arrintaan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisad diblomaasiyadeed ay ka dhaxeeyso dalalka Khaliijka iyo dowladda Qatar, taas oo laga cabsi qabo inay saameyn weyn ku yeelato siyaasadda Soomaaliya.